SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mutambo werudzii? Bhaibheri rinoti: “Jehovha anoongorora munhu akarurama pamwe chete neakaipa, Mweya wake unovenga munhu wose anoda zvechisimba.”—Pisarema 11:5.
Unoutamba sei? Bhaibheri rinoti: “Musingaiti chinhu nokukakavara kana kuzvikudza, asi nepfungwa dzinozvininipisa muchifunga kuti vamwe vakuru kwamuri.”—VaFiripi 2:3.
Unoutamba kwenguva yakawanda sei? Bhaibheri rinoti: “Muve nechokwadi chokuti zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe ndezvipi.”—VaFiripi 1:10.
“Kutamba mitambo hakungoiti kuti urovedze muviri wako chete, asiwo kunoita kuti ufare uye kuti uve neutano hwakanaka. Zvinokubatsira kuti udzidze kuramba uchizvininipisa paunohwina uye kuti usare uine ruremekedzo paunokundwa.”—Abigail.
“Ndinofarira zvemitambo, asi hainditadzisi kuita zvimwe zvinhu zvandinenge ndichifanira kuita. Kuona mutambo kwakaita semubayiro wandinozvipa wekuti ndakwanisa kuita zvandaifanira kuita. Zvinoita kuti ndiwane simba rekuita mabasa andinofanira kutanga ndaita uye kuti ndizive zvekuisa pekutanga muupenyu.”—Deven.